မြောက်ကိုရီးယားနှင့် တင်းမာနေချိန် အမေရိကန် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောများ ပစိဖိတ်တွင် စစ်ရေးလေ့ကျင?? - Yangon Media Group
မြောက်ကိုရီးယားနှင့် တင်းမာနေချိန် အမေရိကန် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောများ ပစိဖိတ်တွင် စစ်ရေးလေ့ကျင??
တိုကျို၊ နိုဝင်ဘာ ၉
ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုအတွင်း ပထမဆုံးအဖြစ် အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောများစုပေါင်းကာ ပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာနောက်ပိုင်း၌ ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း နိုဝင်ဘာ ၉ ရက်တွင် အမေရိကန်ရေတပ်က ပြောကြားလိုက်သည်။ ဤလေ့ကျင့်မှုမှာ မြောက်ကိုရီးယားနှင့် တင်းမာမှုဖြစ်ပွားနေချိန်၌ ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
အမေရိကန် လေယာဉ်တင်သင်္ဘောများဖြစ်ကြသည့် USS ရော်နယ်ရီဂင်၊ USS နီမစ်ဇ်နှင့် USS သီအိုဒိုရုစဗဲ့လ်(တ်)တို့ ဆုံစည်းကြမည်ဖြစ်သည်။ နိုင်ငံတကာရေပြင်၌ ပူးတွဲလေ့ကျင့်ကြမည်ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်သမ္မတ ဒေါ်နယ်ထရန့်၏ အာရှခရီးစဉ်၌ တရုတ်ပြည်သို့ ရောက်ရှိနေသော ကာလလည်းဖြစ်သည်။ ဤစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုက အမေရိကန်၏ ဒေသတွင်းလုံခြုံရေးနှင့် တည်ငြိမ် ရေးကတိကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်ပစိဖိတ်ရေတပ် တပ်မှူးချုပ် စကော့ဆွစ်ဖ်က ပြောကြားလိုက်သည်။ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်တွင် ထရန့်က မြောက်ကိုရီးယားကို သတိပေးပြောကြားခဲ့ရာ အမေရိကန်ကို တိုက်ရန်မကြိုးစားနဲ့ဟု သတိပေးခဲ့သည်။ ကင်ဂျုံအန်သည် လမ်းမှန်ကို လျှောက်သင့်သည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ နိုဝင်ဘာ ၈ ရက်၌ ထရန့်နှင့် တရုတ်သမ္မတ ရှီတို့တွေ့ဆုံရာတွင် မြောက်ကိုရီးယား၏ နျူကလီးယားနှင့် ဒုံးပျံကိစ္စများ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ တရုတ်-အမေရိကန်တို့ ကတောက်ကဆတ်ဖြစ်ရာတွင် တောင်တရုတ်ပင်လယ်၌ ရေတပ်တည်ဆောက်ခြင်းလည်း ပါဝင်သည်။
အမေရိကန်လေယာဉ်တင်သင်္ဘောများက လေကြောင်းကာကွယ်ရေးကိုပါ လေ့ကျင့်ကြမည့်အပြင် ပင်လယ်၏ထောက်လှမ်းရေး၊ လေကြောင်းကာကွယ်တိုက် ခိုက်ရေးလေ့ကျင့်ခန်းနှင့် အခြားလေ့ကျင့်ခန်းများလည်းပါဝင်ကြောင်း ရေတပ် ကပြောခဲ့သည်။ လေယာဉ်တင်သင်္ဘောနှစ်စင်း ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှု ရှားရှားပါးပါးဖြစ် ပြီး၊ ယခုသင်္ဘောသုံးစင်း ပူးတွဲလေ့ကျင့်မည်ဟု ဆွစ်ဖ်က ပြောခဲ့သည်။ လေယာဉ် တင်သင်္ဘောသုံးစင်း ပူးတွဲစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုမှာ အလွန်ရှားပါးသောဖြစ်ရပ်ဟုဆိုသည်။ ၂ဝဝ၇ ခုနှစ်မှစ၍ ပထမဆုံးဖြစ်သည်။ လေ့ကျင့်မှုကို နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်မှ ၁၄ ရက်အထိ ပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အင်အားရစ်(ခ်ျ)တာ စကေး ၄ အထက်ရှိ မြေငလျင်နှစ်ခု ပြည်တွင်း၌ တစ်နေ့တည်းနှစ်ကြိမ် လှုပ်
နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆွဲဆောင်မှု အရှိဆုံး အေပက် ထိပ်သီးငါးနိုင်ငံတွင် ထိုင်း ပါ??
ဂန့်ဂေါနယ်ထွက် ဖရဲသီး မြန်မာ-အိန္ဒိယနယ်စပ်မှ ဝယ်ယူမှုများသည့် အတွက် ဖရဲစိုက်တောင်သူများ ဈေ??
တနင်္သာရီမြို့နယ် လယ်သစ်ကျေးရွာ၏ လမ်းမပေါ်၌ လူသတ်မှုဖြစ်
ယခုနှစ်တွင် ရခိုင်အရေး နိုင်ငံတကာ ဖိအားပေးမှု တုံ့ပြန်နိုင်ရန်နှင့် နိုင်ငံ့ပုံရိပ် ပြန်မြ
ကိုနေတိုးနဲ့ အချစ်ဇာတ်ကားကို ရိုက်ရမှာဆိုတော့ သူ့ကို နည်းနည်းတော့ ရှိန်တယ် – နေခြည်ဦး